वास्तुकला, लिपिकला र मिष्ठान्न परिकारबीच के सम्बन्ध छ ? - संवाद - नेपाल
वास्तुकला, लिपिकला र मिष्ठान्न परिकारबीच के सम्बन्ध छ ?
वास्तुशास्त्री तबस्सुम सिद्दिकीसँग अचानक
वास्तुकला, लिपिकला र मिष्ठान्न परिकारबीच कुनै सम्बन्ध छ ? यी तीन फरक–फरक विधा र विषयबीच हत्पत्ति सम्बन्ध नदेखिन सक्छ । तर, वास्तुशास्त्री (आर्किटेक्ट इन्जिनियर) तबस्सुम सिद्दिकी यी तीनै विषयलाई एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित ठान्छिन् । र, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत जोडेर उनले ३१ वैशाखमा राजधानीमा क्यालिग्राफी (लिपिकला) तथा मिष्ठान्न परिकार प्रदर्शनी र वास्तुकला प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गरिन् । यसै सन्दर्भमा द मदर फाउन्डेसनकी अध्यक्षसमेत रहेकी सिद्धिकीसँग गरिएको कुराकानी :
खासमा के हो क्यालिग्राफी ?
क्यालिग्राफीको अर्थ हो, सुन्दर लेखन । विश्वभरिका मुस्लिम देशमा अरबी, फारसी, उर्दू भाषा र लिपिलाई कलात्मक ढंगबाट लेख्ने चलन छ । यसमा पनि विभिन्न मुलुकका आफ्नै विशेषता छन् ।
नेपालमा यसको के महत्त्व छ ?
प्राचीनकालदेखि नै नेपालमा राजा–महाराजाले आफ्ना सरकारी लालमोहर र मुद्रामा अरबी, उर्दू लिपिको सुन्दर लेखन गरी प्रदर्शित गर्दै आएको इतिहास साक्षी छ । त्यसकारण यसको ऐतिहासिक र कलात्मक दुवै खालको महत्त्व छ ।
अन्य भाषामा क्यालिग्राफीको चलन छैन र ?
अन्य भाषा र लिपिमा यसको चलन कम छ । इस्लामिक शब्द र अक्षरमा क्यालिग्राफीको चलन प्रचुर मात्रामा छ ।
मिठाई र क्यालिग्राफीको के सम्बन्ध छ ?
नेपालमा मुस्लिमहरूको उल्लेख्य संख्या भए पनि यस समुदायको कला, संस्कृतिबारे अन्य धर्मावलम्बीलाई जानकारी छैन । अन्य समुदायलाई पनि जानकारी दिन इस्लामिक क्यालिग्राफीका साथै मुस्लिमहरूको मिष्ठान्न परिकार प्रदर्शित गरिएको हो ।
प्रदर्शनीमा केकस्ता वस्तु समावेश गर्नुभयो ?
नेपाली मुस्लिम समुदायमा प्रचलित मिष्ठान्न आहाराका साथै मुस्लिम मित्रराष्ट्रका जनताले प्रयोग गर्ने मिष्ठान्नहरू प्रदर्शित गरियो । पाकिस्तान, इजिप्ट, संयुक्त अरब इमिरेट्सको पनि सहभागिता थियो । नेपालले प्राचीनकालमा प्रयोग गरेको अरबी, उर्दू क्यालिग्राफी तथा पाकिस्तान, इजिप्ट तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सले आ–आफ्ना क्यालिग्राफ प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसमा वास्तुशास्त्र कसरी सम्बन्धित भयो त ?
नेपाल सांस्कृतिक विविधताको मुलुक भए पनि आफ्ना कला, वास्तुकला, संस्कृतिलाई विश्वमा परिचित गराउन सकेनौँ भन्ने लागेर एकै ठाउँमा तीन खालका प्रस्तुतिको समायोजन गरिएको हो ।
प्रदर्शनीपछि कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो त ?
नेपालमा यस्तो कार्यक्रम नौलो हो । त्यसैले यसको विशेष महत्त्व छ, जसलाई कार्यक्रममा उपराष्ट्रपतिज्यूदेखि कला क्षेत्रका विज्ञहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रशंसा गर्नुभयो ।
तपाईंको अध्ययन हिन्दु वास्तुशास्त्र हो कि इस्लामिक ?
मैले पाकिस्तानमा पढेँ तर स्नातकोत्तरको शोध भने हिन्दु वास्तुशास्त्रमा गरेँ । अहिले हिन्दु वास्तुशास्त्र तथा इस्लामिक वास्तुकलाबीच तुलनात्मक अध्ययनमा विद्यावारिधि गर्दै छु । यसको उद्देश्य आफ्नो मुलुकको कला, वास्तुकलाबारे मुस्लिम राष्ट्रका जनतालाई सुसूचित गराउने तथा मुस्लिम कला–संस्कृतिलाई नेपाली जनतामा परिचित गराई आपसी सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने हो ।
हिन्दु वास्तुशास्त्रमा कुनै परियोजना पनि गर्नुभयो ?
काम त धेरै गरियो । तर, मेरो विशेष चाहना भनेको हिन्दु वास्तुशास्त्रमा आधारित एउटा १ सय ५० शय्याको अस्पताल हो । डिजाइन तयार गरेकी छु । साकार रूप दिन पाए हुन्थ्यो ।